Maamul goboleedyada oo lagu booriyay inay wax ka qabtaan nafaqa darrada – The Voice of Northeastern Kenya
Maamul goboleedyada oo lagu booriyay inay wax ka qabtaan nafaqa darrada
Wasiirka wasaaradda beeraha ee dalka Mr. Mwangi Kiunjuri ayaa dowlad goboleedyada dalka iyo shirkadaha sida gaarka ah loo leeyahay u soo jeediyay inay iska kaashadaan sidii loola tacaali lahaa nafaqa darrada.
Hadalkan ayuu wasiirku jeediyay kadib markii uu furay shir saddex maalmood soconaya oo ku saabsan sida wax soo saarka beeraha uu xal ugu noqon karo dhacdooyinka ku saleysan nafaqa darrada ee laga soo tabiyo degaanada qaar.
Wasiirka aya sheegay in nafaqa darrada ay tahay caqabada ugu waweyn ee dowlada ka haysato dhanka la tacaalidda cuno yarida oo ka mid ah qorshayaasha ugu horeeya ee maamulka talada haya ee jubilee uu ballanqaaday inuu xoogga saarayo.
Agaasime ku xigeenka hay’adda USAID ee dalka Heather Schildge ayaa sheegtay in Maraykanka uu sii wadayo inuu dowlada Kenya ku tageero dhaqaale loo adeegsan karo soo saaridda cunnada iyo wax ka qabashada nafaqa darrada.
Hay’adda USAID, ayaa sheegtay in ugu yaraan boqolkiba 50 ee caruurta dunida ay u dhintaan dhibaatooyin ka soo gaaro nafaqa darro la soo daristo.
Macluumaadka hay’addan waxaa qeyb ka ah in hal meel saddex meelood caruurta ay nafaqa darro haysato guud ahaan caalamka ay ku noolyihiin qaaradda Afrika.
← Kaaliyaha guddoomiyaha Migori oo 14 maalmood xabsiga ku sii jiraya
Qaramada midoobay oo 38 wadan ku eedeysay xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqul aadanaha →